စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update #02 | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update #02
မြန်မာနိုငံစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ်မှာ ရရှိတဲ့ WUND က ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံမှာ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းဟာ အဆင့် ၃ သို့ လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပြီး ၊ အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲ မှာတော့ အဆင့် ၂ သို့ ဆက်လက် လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ မတိုင်မီ (ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီမတိုင်မီ) မှာ အဆင့် ၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း (တစ်နာရီလေတိုက်နှုန်း ၁၁၅ မိုင်မှ ၁၄၄ မိုင်နှုန်း) နဲ့ Baggo မြို့တောင်ဘက် ကမ်းခြေကို စတင် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အဲဒီနောက် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ ခန့် ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီခန့်မှာ အဆင့် ၁ မုန်တိုင်း အဖြစ်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို စတင်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ အပေါ် ကိုးကား ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ်မှာ ရရှိတဲ့ WUND က ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ မတိုင်မီ (ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီမတိုင်မီ) မှာ အဆင့် ၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း (တစ်နာရီလေတိုက်နှုန်း ၁၁၅ မိုင်မှ ၁၄၄ မိုင်နှုန်း) နဲ့ Baggao မြို့တောင်ဘက် ကမ်းခြေကို စတင် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အဲဒီနောက် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ ခန့်(ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီခန့်)မှာ အဆင့် ၁ မုန်တိုင်း အဖြစ်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို စတင်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ အပေါ် ကိုးကား ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, super-typhoon, typhoon, weather. 1 Comment »
One Response to “စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update #02”
ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းသို့ စူပါတိုင်ဖွန်းလေပြင်းများစတင် တိုက်ခတ်လျှက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
« စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update #03 »